Thayilendi - ALinks
Ungawufumana njani umsebenzi eThailand?
January 10, 2022 IShubham Sharma imisebenzi, Thayilendi
IThailand, ekumazantsi eAsia, inezinto ezininzi ezidumileyo. IThailand idume kwihlabathi jikelele ngezinto ezinomtsalane kubakhenkethi. Ngaphandle kwezi ndawo zinomtsalane kubakhenkethi, uninzi lwabemi beza eThailand bezokufumana imisebenzi. Imarike yomsebenzi kwi
Uyifumana njani i-visa eThailand?
January 8, 2022 UKaruna Chandna Thayilendi , ivisa
URhulumente woBukumkani baseThailand wazise inkqubo yevisa. Ngexesha lokufika kwabo elizweni. I-Visa ekwi-Intanethi ye-Thailand sisigunyaziso se-elektroniki sokuhamba siye eThailand. Kungenxa yeenjongo zokhenketho. Kwakhona, ukuya
Iindawo ezintle eziza kutyelelwa eBangkok nakwezinye iindawo eThailand
Agasti 22, 2020 UAntika Kumari Thayilendi , izinto zokwenza, hamba
Ukhenketho ligalelo elikhulu kuqoqosho lweThailand. Kuyinxalenye ye-South East Asia, apho une-Singapore kunye ne-Thailand, amazwe aneshishini lokhenketho olwenziwe kakuhle. Ukwanamazwe avula nje abakhenkethi,
Inkqubo yemfundo eThailand. Izikolo eThailand
Februwari 25, 2020 UMaitri Jha isikolo, Thayilendi
Ngaba uceba ukufudukela eThailand nosapho lwakho kunento enye esoloko isengqondweni yakho yinkqubo yesikolo kunye nemfundo eThailand yokuqinisekisa ikamva elingcono labantwana bakho. Ngokwedilesi yokuhambisa, ipesenti yokufunda
Jonga iThailand ngeyona ndlela inexabiso eliphantsi yoThutho !!
Oktobha 15, 2019 UKaruna Chandna yibakhona, Thayilendi , hamba
Ezothutho eThailand: Isikhokelo esilula sokufikelela eThailand !! I-Thailand ineendlela ezininzi zothutho ezihlala zivela kuzo zonke iimilo kunye nobukhulu obahlukeneyo. Ezi milo kunye nobukhulu zihlala zihluke kakhulu kwiidolophu ezincinci kwaye
Izibhedlele eziphezulu eThailand!
Oktobha 15, 2019 UKaruna Chandna impilo, Thayilendi
Sasisoloko sigula xa sihamba. Ngokubanzi ngenxa yotshintsho kwimeko-bume, ukuzibandakanya nokungafumani kukhathalelo olufanelekileyo okanye ukuphumla komzimba. Ke, kufuneka sibe nolwazi oluthile lwezibhedlele ezilungileyo kwisixeko okanye ilizwe esihamba kulo. Apha
Ucwangcisa uhambo oluya eThailand kungekudala? Ndwendwela ezi ndawo zintle zokhenketho !!
Oktobha 15, 2019 UKaruna Chandna Thayilendi , hamba
Yintoni eyaziwa ngokuba yiThailand? A. I-Thailand lihlabathi lonke elidume ngemisipha ye-spa, iilwandle, iitempile zamaBuddhist, ubusuku bobusuku, kwaye, kunjalo, ukuya ezivenkileni. Abakhenkethi abancinci, iBangkok, Pattaya kunye nePhuket ziyiparadesi ukuze bonwabe ebusuku; ngelixa abathandi bendalo, siqithi
Ixesha elifanelekileyo lokuya eThailand
Oktobha 14, 2019 UKaruna Chandna Thayilendi , hamba
IThailand ikwabizwa ngokuba liLizwe loNcumo. Amatye anqabileyo aseMzantsi-mpuma Asia. Abantu bahle kakhulu kweli lizwe kwaye baya kukwamkela njengelungu losapho. IThailand yenye yezona ndawo zidumileyo zokutyelela.
Kuhambo oluya eThailand? Kufuneka ujonge ezi Zona ziXabiso ziBalaseleyo !!
Ihotele kuphela kwendawo kwihlabathi elinomsebenzi ophambili kukunyamekela, iimfuno, iminqweno kunye nolwaneliseko iiyure ezingama-24 ngosuku. Yonke imisebenzi inemisebenzi yayo, umsebenzi wayo kunye nokuba izabalazela ntoni. I